About Us - Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd
Kamiao fantsona konkona
Paompy Vatosoa kely
Zavamaniry mitrandraka mivaingana
Kamiao mixer mivaingana
Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd dia estabilished tamin'ny 1993. Manomboka izao dia tena manana famokarana faladiany telo no hita ao 1.Qingdao isanisany Shangdong, 2.Xi'an Shanxi sy 3.Liuzhou Guangxi. Setted ny 28 Corporate Service anjara fanompoana ao an-tokantrano sy ampitan-dranomasina ..
"CO-NELE marika" Avy amin'ny alemà mandroso sy henjana filozofia ara-teknika, ara-teknika dia mitambatra ny fikarohana, famokarana, ny varotra ary rehefa niara-varotra fanompoana.
Construction milina anisan'izany ny Boom Pump Truck 25m ny 56m, Concrete nametraka Boom Mobile karazana HGY13 ho HGY23, tena Mananika karazana 24m ny 35m, Small tsara aggregate XBS serial Concrete Pump 20-40m3 / h, JBT serial Concrete Mixer Pump 30-40m3 / h, HBT serial Concrete Pump30-100m3 / h, Shotcret fanafody Machine, Batching Plant sy ny sisa.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra mety ho hita manerana an'i Shina sy efa naondrana any Rosia, Korea, Kazakhstan, Iran, Mongolia, Ejipta, Singapore, Malezia, Vietnam, Indonezia, Aostralia, Romania, Amerika, Niger, Congo, Maurice sy ny firenen-kafa . CO-NELE sy ny Super fampisehoana sy be fanantenana ho an'ny fanahy manompo manerana izao tontolo izao.
Tongasoa eto amin'ny mailaka bob@conele.com Raha mila fanazavana fanampiny
Adiresy: TIEQISHAN ROAD 413, CHENGYANG distrika, 266107, Qingdao, Shandong, CHINE
Ny varotra Konecranes sy aorian'ny sal ...
Inona no mampiavaka ny kamiao pump ...
Ahoana no hamahana ny tabataban'ny simenitra paompy T ...
Taorian'ny simenitra paompy fiara dia nijanona f ...
Izay tokony hatao raha lubrication ho levona mandrakizay ny fotoana ...
Celia: Salama, Tongasoa eto hitsidika ny tranokalanay. Aza misalasala mifandray aminay
Celia: inona no tadiavinao?
Tsy misy Thanks Chat Ankehitriny